चिकित्सकद्वारा ओपिडी बहिष्कार
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरुले ओपिडी सेवा बहिष्कार गरेका छन्। अनसनरत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीका माग पूरा गराउन सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै आवासीय चिकित्सकले शुक्रबार देखि ओपिडी सेवाको काम वहिष्कार गरेका हुन्।विभिन्न १० बुँदे माग राखेर आमरण अनसनमा बसेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै जाँदा पनि सरकारले माग पूरा गराउन चासो नदेखाएकाले आफूहरुले बाध्य भएर ओपिडी सेवा बन्द गर्नुपरेको विद्यार्थी चिकित्सकले बताएका छन् । रेजिडेन्ट डक्टरर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष राजु भण्डारीले अध्ययनको नियमित प्रक्रिया अन्र्तगत सेवामा सरिक हुनुपर्ने भएपनि डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि बाध्य भएर ओपिडी सेवा बहिस्कार गर्नुपरेको बताए।
‍अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेका बिरामी र तिनका आफन्तले भने अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द हड्ताल गर्न नहुने बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले तत्काल समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क गरे ।चिकित्सा क्षेत्रमा बेथिति मौलाएको भन्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा केसीले पुन अनसनमा बसेका हुन्।अनसनको १३ औं दिन पुगिसक्दा पनि सरकारले माग सम्बोधनको पहल गरेको छैन । चिकित्सा अध्ययन संस्थानमा डीन नियुक्त गर्दा बरिष्ठताको आधारमा नभएको भन्दै डाक्टर केसी पुन अनसनमा बसेका हुन्।यसअघिका अनसनमा पनि केसीले आर्थिक चलखेलका कारण मेडिकल शिक्षा महंगो भएको र मनपरी शुल्क लिएर मेडिकल कलेजहरुले अभिभावकमाथि ज्यादती गरेको भन्दै पटक पटक अनसन बस्दै आएका छन्।
More in this category: « डा.केसीको स्वास्थ्य बिग्रदै	डा‍. केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले बनायो टोली »